I-Hernani Wilderness Hut: i-WeilHouse yokuhlala - I-Airbnb
I-Hernani Wilderness Hut: i-WeilHouse yokuhlala
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguSusan
Uphumle kwindawo ethe tyaba yaseNew England engqongwe ziipaki zelizwe kunye neefama zeenkomo ezisebenzayo, uHernani Hut yindawo yomlingo yokubaleka entlango kwindawo enomtsalane.
Sinikezela ngeepropati ezi-4 ezizodwa phantsi kwe-brand yethu i-WeilHouse Living. Ukujonga zonke iipropathi ezine cofa kumfanekiso wam weprofayile.
Ezintathu kwezo zakhiwo ziiFama zeFama kwiFama yethu entle eyi-8 acre Organic eBellingen NSW.
Ipropathi nganye yakhiwe ngothando kwaye yabuyiselwa ukunyathela kancinci kwiplanethi kunye nokwandisa iindawo ezintle ezingqongileyo.
Indlu yaseFama yaseBellingen, iBellingen Vintage Farmstay kunye neBellingen Farm Shed zibonelela ngoluhlu olubanzi lokungcamla kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Iindwendwe zingabhukisha ifama yonke ngesiganeko esikhethekileyo. Ukubhukisha ngokuthe ngqo khangela iwebhu ye-Weilhouseliving.
KHANGELA IXESHA: 2pm
IXESHA LOKUPHUMA: 10am
Umbono wethu ulula, sizimisele ukubonelela iindwendwe zethu nge-eco-friendly accomodation kunye nokukubonelela ngendawo entle exhotyiswe ngokupheleleyo ukuba ukonwabele iholide yakho kunye nabo ubathandayo.
INDAWO YETHU YEHUT:
I-eco-hut yethu ebuyiselwe ngobuchule ifakwe kakuhle kwaye ibanzi, ilala ukuya kuthi ga kubantu abalithoba kuyilo olutofotofo olunciphisa unyawo lwakho lwekhabhoni. Yenziwe ngobuchule obususela kumaplanga asetyenzisiweyo kunye nokufakelwa kwamandla elanga angekho kwigridi, indawo yomlilo evutha kancinci kunye neendlela zokuhlala zangaphakathi-ngaphandle ukuze uthathe ithuba lokujonga okumangalisayo kwemini kunye nesibhakabhaka esibengezelayo sasebusuku.
Abaqhubi, abahamba ngehlathi kunye nabathandi bendalo baya kuvuya ngokufikelela lula kwiindawo zokuloba, iindlela zokukhwela amahashe, iingxangxasi, imingxuma yokuqubha, abakhangeli kunye neendlela zokuhamba kuzo zonke iinkalo. Ijikelezwe ngamatyholo kunye nedlelo kwindawo yabucala ngokupheleleyo, le ndlu yindlela emfutshane yokuya edolophini kwizinto ezisisiseko kodwa ikude ngokwaneleyo ukuba ubuye umva kwaye uzalise kwindawo eyodwa, ephefumlayo.
Le ndlu ineplani evulekileyo, ineendawo zokulala ezine ezibandakanya i-loft encinci enomandlalo omnye kunye nokumkanikazi olingana nobukhulu obulungele abantwana, njengoko kukho indawo yokuvula intloko encinci kwindawo ephezulu. Kukho iibhedi ezintathu zobukhulu bokumkanikazi phantsi.Ngelixa nganye ikwindawo yayo, Ukuba ubumfihlo bubalulekile ke le ndlu ayizukulungela njengoko kungekho nalinye igumbi lokulala elineengcango kwaye liyinxalenye yoyilo lwesicwangciso esivulekileyo.
ULWAZI OLONGEZELELWEYO KWINKAMPU yeendwendwe
Iindwendwe ezongezelelekileyo zingagxumeka intente kufutshane nendawo evulekileyo yomlilo kunye nendawo yebarbecue yangaphandle enesinki yayo. Indlu yokuhlambela yangaphandle enendlu yangasese kunye neshawari ineembono ezizukileyo phezu kweepaddokhi kunye nemithi yeziqhamo. Ukususela ekupheleni kwentlakohlaza ukuya ekuqaleni kokwindla ningazinceda kwiipesika, iinectarines, amapere kunye neeplums (phambi kokuba iintaka zenze).
Ukuba ungathanda ukuzisa iindwendwe ezingaphezu kwe-9 enkampini okanye uze nekharavani okanye i-trailer ye-camper nceda uqhagamshelane nam ukuze sixoxe ngokufikelela kwaye ngenxa yokuba inani leendwendwe linokongeza ubunzima kwizixhobo zethu ezinqongopheleyo kwi-hut ( amanzi kunye namandla) ngoko siza idinga ukuxoxa ngokufaneleka ngokuxhomekeke kwiimeko zemozulu kunye nenani leendwendwe ezongezelelweyo kunye neemeko zaloo nto ukubona ukuba ifanelekile.
Indawo yokuhlala enesitayile esivulekileyo inokuvalwa ngeengcango zeglasi zokuthuthuzela ebusika kwaye ibandakanya ikhitshi elinesitovu esivutha kancinane kunye netop yokupheka ngegesi, ekwalungele ukufudumeza indlu yonke ngobo busuku bubandayo basebusika.
Indlu yangaphandle ikwiimitha ezi-5 ukusuka kwindlwana kwaye ineshawari eyahlukileyo kunye nendlu yangasese yokugungxulwa. Zombini zineembono ezimangalisayo ngaphezulu kwegadi yeziqhamo kunye neepaddocks.
Akukho friji (zifunxa amandla amaninzi!) kodwa ungagcina imveliso entsha ebandayo ebandayo kwi-125L yorhwebo i-Esky - ibhokisi yomkhenkce endala enokugcinwa okuninzi. Umkhenkce ukwafumaneka kwisikhululo senkonzo sase-Ebor kwimizuzu emihlanu ukusuka apho. Okanye ungayithatha endleleni eDorrigo, eGrafton okanye eArmidale. Sicebisa iingxowa ze-3-4 zeqhwa.
NCEDA UZISELE AMASHISHITI NEETAWULI ZAKHO
Sinikezela ngesepha, imiqamelo, iidoona, iingubo kunye nephepha langasese .. sinenethi ye-mozzie kwiinyanga zasehlotyeni kunye neebhotile zamanzi ashushu ebusika.
Sinikezela ngeenkuni, iimatshisi, izibane zeamd mozzie coils.
Nangona kunjalo, ngenxa yendawo ekude ye-hut asikwazi ukubonelela ngamashiti eetawuli kunye nemiqamelo. Ngoko ke nceda uze neshiti elifakelweyo, ishiti elisicaba kunye nemiqamelo ukuze ungene phantsi kwee-doonas kunye neengubo ezinikiweyo. Nceda ungasebenzisi ilinen yethu njengoko isetyenziselwa thina kuphela. Zonke iibhedi zinkulukazi ngaphandle kwe matress enye kwigumbi eliphezulu.
Ukuseta kwethu amandla okutsha okucothayo okutshisa elanga kuthetha ukuba mancinci amandla esixhobo sombane, kodwa umbane omnye uyakuvumela ukuba utshaje izixhobo zombane ezincinci. njengeefowuni, iilaptops kunye neebhetri zekhamera. Akukho mbane waneleyo wokomisa iinwele, izixhobo zestereo okanye iingubo ezishushu. Indlu inezibane ezi-6 zangaphakathi.
Inethiwekhi ye-3G ye-Telstra ibonelela nge-mobile coverage.
Sibonelele ngothotho lwemidlalo yebhodi kunye neepuzzle kunye namakhadi kunye neencwadi, ke ukuhlala apha lithuba lokucotha, ukuncokola nomlilo, ukudlala imidlalo, ukufunda kunye nokuphumza indlela yakudala.
Ngenxa yokuba kude kwendlu kunye namandla alinganiselweyo kwindawo umnakekeli wethu uyacoca kwaye alungiselele indlu yokufika kwakho. Into ekufuneka uyenzile kukuyonwabela indlu kunye nayo yonke into enayo. Asikwazi ukusebenzisa ivacuum kwindawo ngenxa yamandla alinganiselweyo. ngoko konke ukucoca kwenziwa ngumtshayelo. Siyakuxabisa ukuqonda kwakho.
IMEKO YEMOYA & UKUFIKELELA IHUT
Sicebisa ukuba uze nevili lonke okanye i-4 wheel drive ukulawula ZONKE iimeko zemozulu.
I-hut ifikeleleka nge-2 wheel drive, nangona kunjalo, nceda ungangenisi imoto ephantsi elele okanye imoto yezemidlalo. Kwimozulu emanzi sincoma ivili lonke okanye i-4 wheel drive ukufikelela kwindlu ngokukhuselekileyo. Ukuba ubhukisha iinyanga phambi kwexesha, asinakuqikelela ukufikelela kwakho de kube kufutshane nomhla wokufika kwakho. Siya kuhlala sinxibelelana nawe ngohlaziyo ukuba ufuna ivili le-4 ukufikelela kwindlu.
Ukwenza impazamo kwicala lokulumkisa sicebisa ukuba ube nesithuthi esifanelekileyo sokulawula zonke iimeko zemozulu kunye nokuphepha ukuphoxeka ukuba imozulu ifuna isithuthi esifanelekileyo ukufikelela.
Xa ufika kwindlu nceda ufunde ifolda yoLwazi ngononophelo, njengoko ichaza apho yonke into ikhoyo kwaye isebenza njani yonke. Kukwakho noluhlu lokukhangela oluneenkcukacha ekufuneka ululandele xa ujonga uqinisekise ukuba indlu ivalwe ngokufanelekileyo kwaye izixhobo zethu zikhathalelwe, ukusilela ukwenza oko kunokubangela ukonakalisa inkqubo yethu kunye nelahleko yebhondi yakho.
UKUFIKA NEZINTO EKUFUNEKA UZAZI
Ukufika eHernani Hut yinxalenye yohambo lwakho lwasentlango. Ifikeleleka kwisithuthi esiqhelekileyo esinamavili amabini kodwa kwimozulu eyomileyo kuphela, ukuba inococeko olufanelekileyo. Izithuthi ezisezantsi ezifana neemoto zemidlalo azifanelekanga. Ukuba bekunetha kakhulu, uya kufuna isithuthi esiqhutywa ngamavili ama-4.
Nje ukuba ubhukishe kuya kufuneka uthumele i-imeyile kuSusan ukuze ufumane ulwazi lwendlu kunye nezalathiso zokufikelela kwindlu. USusan uya kufikelela kuwe ngedilesi ye-imeyile emva kokuba ubhukishe ukuze akuthumelele ulwazi. Awuyi kuyifumana inqugwala ngeemephu ze-sat nav. Yindlela elula, ephawulwe kakuhle umgama oyi-1km ukusuka kwindlela enkulu. Ceba ukufika kwangethuba ngaphambi kokutshona kwelanga, njengoko indlwana inokuba nzima ukuyifumana ebumnyameni.
HUT ULUHLU LOKUHLOLA
I-hut Indawo yokuhlala: abantu abayi-9 endlwini kunye negumbi elongezelelweyo lokukhempisha / iinqwelwana zeekhampani iindwendwe ezongezelelweyo $ 25 umntu ngamnye ngobusuku.
- Iishiti kunye neetawuli AKUFANELEKILEYO
- Sibonelela: Iidonna, imiqamelo, iingubo, iitawuli zeti, iimethi zokuhlambela.
- Ukutshisa okucothayo Indawo yokubasa kunye neenkuni
-Ngaphandle komngxuma womlilo (nceda uqokelele iinkuni zakho zoku)
- Iziseko zePantry
- 24-iyure self check-in
-Amandla okutshaja iibhetri, iilaptops kunye neefowuni
- Iincwadi, imidlalo kunye nezinto zokudlala zabantwana
- Igumbi elongezelelweyo lokukhempisha
- Igumbi lokuhlambela langaphandle kunye nendlu yangasese
- Umntwana friendly
- Izinja kunye nezilwanyana zasekhaya azivumelekanga
-Umngxuma weBonfire wangaphandle kunye nezihlalo
- Itheyibhile yangaphandle kunye neebhentshi
- 1920'3 i-oveni yokutshisa kancinci kunye nesitovu ebusika
- Iinkuni zinikezelwe
Ngenxa yemeko yangoku ye-Covid kunye nokuqinisekisa impilo kunye nokhuseleko lwazo zonke iindwendwe zethu ezityelela ifama yethu kwiholide yazo ngoku sifuna oku kulandelayo: Iindwendwe kufuneka zinikeze uvavanyo lwazo lwe-PCR olungenayo okanye uvavanyo lwazo lwe-RAT (uvavanyo olukhawulezayo lwe-antigen) ngaphambi kokufika. Ukuba iindwendwe ziye zafunyaniswa zine-HIV aziyi kukwazi ukuya kwiholide yazo kwaye ziya kuphulukana nokubhukisha kwazo. Asikwazi ukubonelela ngembuyiselo okanye iikhredithi zokuhamba kwiindwendwe ezingakwaziyo ukuya ngenxa yokuba ne-Covid. Sicebisa kakhulu ukuba iindwendwe zithathe i-inshurensi yokuhamba ukuze zihlawule nayiphi na ilahleko yemali ngengozi ngenxa ye-Covid. Enkosi ngokuqonda kwakho.
Ukuba uhambo lwakho lurhoxisiwe ngenxa yomgaqo-nkqubo karhulumente othintela ukuhamba, okanye ukuvalwa komsebenzi ngenxa ye-Covid 19, siya kukunika ikhredithi yokuhamba enexabiso elilinganayo eliza kusetyenziswa kwiinyanga ezi-6 zomhla wakho wokuqala wokubhukisha. Akukho zandiso zeli xesha, ke sicebisa ukuba ubhukishe ngokukhawuleza ukuthintela ukuphoxeka. Ukuba unciphise inani leendwendwe ukusuka kubhukisho lwakho lokuqala asiyi kukunika nayiphi na imbuyiselo.
Ukuba uvavanya ukuba unayo i-Covid ngaphambi kokufika kwakho, awuzukwazi ukuba neholide yakho. Asiyi kubonelela ngembuyekezo okanye iikhredithi zokuhamba njengoko singenako ukugcwalisa ukubhuka kwakho. Ukuba ufika kwifama yethu kwaye uvavanye ukuba unayo i-Covid ngexesha lokuhlala kwakho, siya kukucela ukuba uhambe kwaye ugqibezele ukuhlala wedwa ekhaya okanye ukubhukisha ixesha elide wamkelekile ukuba ube neholide yakho apha ukuba singaphumla indlu Iiyure ezingama-72 phambi kokuba undwendwe olulandelayo lufike, kwimeko apho kungafuneka unciphise ubude beholide yakho ukulungiselela loo msantsa wokhuseleko.
IZINTO ENINOKUZENZA KWINDAWO:
Ebor Falls 5 imiz
Ukukhwela ihashe eDundurrabin 15 mins
IBushwalks kunye nokuhamba intaba kwiGuy Fawkes River Nature Reserve kunye neNew England National Park 20 mins
Ifama yeTrout kunye nokuloba kwiPaki yeSizwe yaseNew England 20 imiz
Iindidi zemingxuma yokuqubha phakathi kwemizuzu eyi-15
Iimarike zempelaveki 10 min
Ababuki zindwendwe bakho abekho kwisiza
Indlu ibucala ngokupheleleyo kwaye izimele kwaye akukho kudibana ubuso ngobuso nababuki zindwendwe bakho. Sihlala iyure enye kude eBellingen apho siqhuba iBellingen Vintage Farmstay, iBellingen Farm Shed kunye neBellingen Farm House kwindawo yethu entle eyi-8 acre biodynamic "fama ehlekisayo".
Sinomgcini-mgcini obeka i-hut ukuze uhlale kwaye ukhangele ukuba iinkqubo zethu zegesi, i-solar kunye namanzi ziye zacinywa ngokufanelekileyo kwiiyure ezingama-24 zokuhamba kwakho. Umkhathaleli wethu uhlala kufutshane kwaye ufumaneka kwiimeko ezingxamisekileyo kuphela.
Indlu ibucala ngokupheleleyo kwaye izimele kwaye akukho kudibana ubuso ngobuso nababuki zindwendwe bakho. Sihlala iyure enye kude…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3858
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hernani